April 2012 | မိုးသကျဦးလှငျ
Posted by မိုးသက် at 12:02 PM 17 comments Read more
Posted by မိုးသက် at 2:56 PM 11 comments Read more
မနက်ဖြန်ဆိုရင်.. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုရောက်ပြီ
ပေါ့.။ခုချိန်ဆို . မဏ္ဍာပ်ပေါ်မှာ အဆင်သင့်ညအိပ်တဲ့သူတွေနဲ့.။ မနက်ဖြန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြသူ
တွေ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေလောက်ပြီပေါ့.။ ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်း ပြောမပြနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊လွတ်လပ်
ရဲ့ ပင်ကိုစိတ်မှာ သင်္ကြန်ပိုးဆိုတာပါလာတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားလိုပဲ.။ဘယ်လောက်ပဲ ထုံထိုင်းမှိုင်းနေ
ပေမယ့်. သင်္ကြန်နဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ်မကပ်နိုင်သူတွေ.၊အပျော်တွေနဲ့ကင်းကွာနေသူတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့.။အဲဒီလူ
ဟုတ်တယ်..ကျွန်တော် ငယ်ငယ်လေးကတည်းကသင်္ကြန်ဆို စိတ်လွတ်လက်လွတ် မပျော်ဖူးဘူး.။စိတ်
လွတ်လက်လွတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ. ကခုန် ဖို့တောင် မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမယ်.။ဟိုးအရှေ့ပိုင်းကို မမှတ်မိပေမယ့်ကျွန်
တော်၈တန်းနှစ်အထိသင်္ကြန်ကို မိုးကုတ်မှာပဲကျခဲ့တာ.။နှစ်တိုင်းအမေက နွေကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင်မိုးကုတ်
ကိုပြန်လေ့ရှိတယ်လေ.။မိုးကုတ်မှာက. ရေအင်မတန်ပေါတယ်. ကျောက်တွင်းလည်းပေါတော့ရေစုပ်စက်တွေ
နဲ့ ပက်လေ့ရှိကြတယ်.။ ဒါပေမယ့် မိုးကုတ်ကလည်း ပြင်ဦးလွင်လိုပါပဲ ချမ်းအေးတဲ့အရပ်ဒေသဖြစ်တော့.ရေ
ကိုအကြာကြီး မကစားနိုင်ဘူး.။ ညနေဆိုရင် နားပြီး အနွေးထည်ထူထူဝတ်ပြီးအိမ်ထဲမှာပဲနေရတော့တာ..။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အပျော်အပါးကို သိပ်မမက်မောတတ်သလိုပါပဲ.။အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတာ
ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်.။၉ တန်းနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာပဲ. ဘယ်မှ မသွားဖြစ်ဘူး. အိမ်မှာပဲ
ပြီးသွားတယ်.။ ၁၀ တန်းနှစ် သင်္ကြန်မှာတော့.. အမေနဲ့ ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာရဲ့ ဓမ္မ မဟိမာ တရားစခန်းမှာ
၀စီပိတ်ဝင်ရတယ်..။ ၁၀ တန်းပြီးတော့ စစ်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်တော့လည်း ကျောင်းကမဏ္ဍာပ်မှာလည်း
ကျွန်တော် သိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး.။ အဆိုတော်တွေ လည်းလာပါတယ်. ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်သလိုခံ
စားရတယ်.။ ဘာဖြစ်လို့လဲ တော့မသိဘူး.။ အဲဒီ ခံစားချက်ကို မကောင်းမှန်းတော့သိတယ်.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်
တော့် စိတ်ကိုက အလွန်အမင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းကို မနှစ်သက်တာလား မခံစားတတ်တာလား ဆိုတာ ကျွန်တော်
မသိပါဘူး.။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သင်္ကြန်ကိုမျှော်တတ်တယ်.။သူများတွေပျော်တာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျ
တတ်တယ်.။တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းက လာခေါ်ရင် ၀င်က တတ်တယ်.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်မှာ
အဲဒီလောက် မပျော်ဘူး.။ သူများတွေပျော်နေရင် ကျွန်တော် သဘောကျတယ်.။ ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမိ
မှတ်မှတ်ရရ သင်္ကြန်တွေထဲမှာ. မနှစ်က သင်္ကြန်ကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ အတွက် ရုပ်အဆိုးဆုံးနဲ့..
အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံးပေါ့..။ကျွန်တော်နဲ့ ဘောလုံး တွဲကစားတဲ့.. သူငယ်ချင်း. လူ့လောကကြီးကိုစွန့်ခွာသွား
တယ်.။တက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ ဖြစ်နေရုံကလွဲလို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး..။ ကိုယ်တိုင် အခေါင်းကိုထမ်းပြီး
လိုက်ပို့ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ.။ သူများတွေပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ.. ကိုယ်က အံကိုကြိတ်ပြီး..အပူခရီးတစ်ခုကို သွားခဲ့
ရတယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ..။ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ဆိုရင် သူဆုံး
တာ ၁ နှစ်တောင်ပြည့်ခဲ့ပြီ..။ အပြန်ခရီးမှာ ဖခင်ဆုံးလို့ ပြန်လာတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ထပ်တွေ့တယ်.။ သားသမီး
ဆုံးပါးတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ခံစားမှုရော.၊ မိဘ ဆုံးပါးတဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ခံစားမှုရောကို မရှေးမနှောင်း ကိုယ်ချင်းစာ
ခဲ့ရတယ်ဗျာ..။ သင်္ကြန်ဆိုတာ မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပါ..။ အားလုံးက ပျော်ရွှင်ချင်ကြတယ်.။ကျွန်တော့်လိုမပျော်
တတ်တဲ့သူတောင် သူများပျော်တာကိုမြင်ရင် စိတ်ချမ်းသာတယ်.ဗျာ.။သူငယ်ချင်း ဆုံးပါးခဲ့တာကကျွန်တော်
သိပ်မုန်းတဲ့ အရက်ကြောင့်ပါ..။ ခုခေတ် ကျွန်တော်တို့အရွယ်တွေ သင်္ကြန်ဆိုရင် တော်တော်များများက
သောက်ကြတယ်.။အပျော်လွန်ကြတယ်.။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ပျော်တာပျော်နိုင်ပေမယ်. တရားလွန်
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပျံ့နေတဲ့ မဏ္ဍာပ်တစ်ခု က မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတဲ့ဗွီဒီယို ကလစ်ကို
ကြည့်ပြီးသူတွေ များမယ်ထင်ပါတယ်.။ ပို့စ်ထဲမှာ ထည့်ပေးချင်ပေမယ့်. တော်တော်ကို ကျက်သရေတုံးလွန်း
လို့(ကန်တော့ဗျာ) တင်မပေးတော့ပါဘူး.။တော်တော်ကို ဆိုးပါတယ်.။ ကိုယ့် ညီမ ၊ ကိုယ့်အစ်မသာဆိုရင်
ဘယ်လို များလုပ်မိမလဲမသိပါဘူး.။ ကိုယ်ကပဲ ပြင်ပလောက နဲ့ အဆက်အသွယ်ပျက်နေတာလား တော့မသိ
ပါဘူး.။ကျွန်တော်တို့ မျက်စိထဲမှာတော့ တော်တော်ကို ရိုင်းပါတယ်.။ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေမှာတောင်
ခပ်ကြဲကြဲပဲတွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်.။ဟိုတစ်လောက အစ်မ ချိုချဉ် ရေးတဲ့ ပို့စ်ထဲက..အဆိုတော်
ပေါက်စလေး တစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းကို ကြည့်မိတော့လည်း တော်တော်ကို. စိတ်မချမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်.။
နောက်ဆို ကျွန်တော်တို့ သားသမီးတွေ ခေတ်ရောက်ရင် မြန်မာဇာတ်ကားကိုတောင် မိဘက ရွေးပေးရမယ့်
သဘောမျိုးဖြစ်နေပါပြီ...။နောက်ပိုင်း မြန်မာဗွီဒီယိုကားတွေပေါ်မှာ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများသာ ဆိုတဲ့စာတမ်း
တွေပါလာမယ်ထင်တယ်.။ ကျွန်တော်တို့လည်း လူငယ်ပါ..။ လူငယ်တောင်မှ အငယ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်လို့
ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဲဒီမြင်ကွင်းမျိုး ၊ အပြုအမူမျိုးကိုမကြိုက်ပါဘူး.။ မကြိုက်ဘူး
ဆိုတာ ထက်လုံးဝကို မဖြစ်သင့်ဖူးလို့ ခံယူထားပါတယ်.။
ခုနက အစ်ကို မောင်တစ်လုံး ဖဘ မှာရေးထားတဲ့ပို့်စ်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်.။ သူပြောသွားတာ သိပ်
မှန်တာပဲ.။မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု မဟာသင်္ကြန်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးရှေ့ က ရွှေမြန်မာမမများရဲ့ဝတ်စားဆင်
ယင်ပုံက စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ.။မြန်မာစကားမှာ မိန်းမမြင်တိုင်းရှုပ်တတ်တဲ့သူကို
အိုင်တွေ့တိုင်း ခြေဆေးတတ်တဲ့သူလို့ ခေါ်ကြပါတယ်.။ဒါပေမယ့် ဒီလိုမိန်းကလေး မျိုးတွေကိုကျတော့ဘယ်
လိုခေါ်မလဲ.။ကျွန်တော်သူများသားသမီးကိုလည်း လက်လွတ်စပယ်မပြောချင်ပါဘူး.။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်
အထင်တော့ ခြေဆေးတဲ့သူတင်မကပဲ. ခြေဆေးရေနဲ့ တူအောင်နေတဲ့သူမှာလည်း အပြစ်မကင်းဘူးလို့ထင်
ကျွန်တော် အရင်ကသတိမထားမိပေမယ့် ဒီကိုရောက်လာတော့ အနောက်တိုင်းသားတော်တော်များများ
စိတ်ဝင်စားတာက အရှေ့တိုင်းရဲ့ လူနေမှုပုံစံနဲ့..ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတာကိုတွေ့
ရပါတယ်.။ သူတို့နဲ့ တွေ့မိ စကားပြောမိမှ. သူတို့ က အရှေ့တိုင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အရှက်အကြောက်ကြီးမားမှု
ကို အထင်ကြီးလေးစားကြတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်.။ ဒီဘလော့လေးရဲ့ အစောပိုင်းမှာရေးထားတဲ့..
ဥရောပတိုက်သူတစ်ဦး ပြောပြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာလူမျိုးများအကြောင်း ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးမှာလည်း မြန်မာ
လူမျိုးတွေအပေါ်ကို ဘယ်လို မြင်ကြလဲ ဆိုတာရေးထားပါတယ်.။(အဲဒီပို့စ်လေးကိုFacebook မှာရှယ်ကြတာ
၇၀ ကျော်ပါတယ်.။)မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို သဘောကျကြသလို လေးလည်းလေးစား အထင်လည်းကြီးကြ
တာကိုတွေ့ရတော့ ကျွန်တော် ပြောမပြတတ်အောင်ဝမ်းသာမိပါတယ်.။
မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံများကို သဘောကျဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်ထားလိုက်ကြပုံများ... ။
ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဗျာ..။မနက်ဖြန်ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာများရဲ့အတာသင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူး
ကာလကိုရောက်ပါပြီ.။ ဒီနှစ်တော့ ဥပုသ်မရပါဘူး.။ အခမ်းအနားမှာ သီချင်းဆိုဖို့ စက်ပြင်ပေးရမယ့် ဓါတ်စက်
ဆရာဖြစ်နေလို့ပါ.။ (နစ္စ၊ ဂီတ က အလိုလိုကျိုး... ဟီး..)။သူများတွေကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးရပါဦးမယ်.။သူငယ်
ချင်းတွေပျော်ရွှင်စေဖို့.. သီချင်းဆိုပေးရပါဦးမယ်.။ပေါက်စကတော့ ၀ိုင်ယာလက်စ်လိုင်းတွေကျနေတော့
ဘယ်လို ပလန်တွေရှိလဲမသိသေးပါ..။ အလုပ်တွေများနေလို့.. ပို့စ်အတင်နည်းရင်လည်းသည်းခံခွင့်လွှတ်ပေး
ကြပါဦးနော်..။ လောလောဆယ် စာနဲ့နပန်းလုံးတာ သူ့ဖက်က နိုင်နေလို့ပါ..။ အားလုံး မဟာသင်္ကြန်နှစ်သစ်
Posted by မိုးသက် at 1:30 PM9comments Read more
ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မော်စကိုကိုရောက်လာတာတောင် (၇)လရှိပါပြီ..။ဒီကြားထဲမှာ အမိနိုင်ငံတော်
ကြီးမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာသတင်းတွေမှာကြားရပေမယ့်. ကျွန်တော်မောင်မိုးသက်ကတော့
အရင်ကလိုပဲ.။ ဘာမှ ပြောင်းလဲ မသွားပါဘူး.။ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို .. ဒီမှာမထိုင်နဲ့ ဟိုမှာပြောင်းထိုင်လို့ ပြောလိုက်သလိုပါပဲ။မော်စကိုမှာလည်းမိုးသက်တို့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲ..။တစ်ခုတော့ရှိတယ်.။
နေပူဒဏ်မခံရတော့ အသားနည်းနည်းဖြူလာတယ်.။ ဟင်းချက်တဲ့Skillလေးတွေနည်းနည်းတက်လာတယ်.။
နည်းပညာပိုင်းတွေ ပိုဖတ်ဖြစ်လာတယ်.။ အကောင်းဆုံးနဲ့ အကျေနပ်ဆုံးကတော့ ဒီဘလော့လေး ဖြစ်ပေါ်လာ
ဒီမလာခင်တုန်းကတည်း ကကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပါတယ်.။ကျွန်တော်က ဘယ်လိုနေရာရာကို
ရောက်ရောက် ပုတ်သင်ညိုလို အရောင်ပြောင်းမသွားတတ်ဘူးလေ.။ အားနည်းချက်လား အားသာချက်လား
တော့ မကွဲပြားဘူး..။ ကိုယ့်မှာ အရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲ. နေတတ်တာကိုက အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာလေ.။ ပြီး
တော့ကျွန်တော်က ပြင်ဦးလွင်သား.။ဂုဏ်ဖော်ပြီးမရှိရှိတာပြောရမယ်ဆိုရင်. ကျောင်းမှာကတည်းက ပြင်ဦးလွင်
သားတွေတော်တော်များများက လူဆိုးတွေနည်းပါးတယ်.။ လိမ္မာတဲ့သူများသလို အချင်းချင်းလည်းထိန်းကြ
တယ်.။ ရန်ကုန်သားတွေက လူလည်တွေ ။စကားပြောရင် သူတို့ပြောတဲ့ ဘန်းစကားများကို မောင်မိုးသက်တို့
တောင်ပေါ်သားတွေနားမလည်ဘူး.။ မန္တလာသားတွေကလည်း ရန်ကုန်သားများနီးနီးလည်ကြတယ်.။ အချို့
အထက်အညာ ဘက် ၊ အောက်ပြည်ဘက်က တောဘက်က သူငယ်ချင်းတွေကျတော့လည်း နည်းနည်းရိုးကြ
တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ကျတော့ တောမက ၊ မြို့မကျ ..၊ခေတ်ရှေ့ကို မပြေးနိုင်ပေမယ့် ခေတ်နောက်
ကိုတော့ မကျန်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ထင်မိပါတယ်.။
သူငယ်ချင်းတော်တော်များများနဲ့ ဆုံမိတော့ သူတို့ ဒေသ စကားတွေ မတူညီမှုတွေကိုပြောကြတယ်. ။
ငြင်းခုံကြတယ်.။ ဒေသန္တရ စကားတွေ ၊ လေသံတွေ ကလည်းတူမှ မတူကြပဲကိုး.။ ပျဉ်းမနားဘက်က၊ဖြူး၊
တောင်ငူ ဘက်က သူငယ်ချင်းတွေက..။ ရှ နဲ့ ချ နဲ့ မကွဲဘူး.။ မျှစ်ချဉ် ဆိုရင် မျှစ်ရှဉ် လို့ ပြောတယ်..။ ချစ်
တယ်ဆိုရင် . ရှစ်တယ်လို့ပြောတယ်.။ အဲဒီလို တွေ..။ မော်လမြိုင်ဘက်က သူတွေကျတော့..ရှ နဲ့ ဆနဲ့ မကွဲ
ပြန်ဘူးခင်ဗျ..။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့. စစ်မိန့်သံပေးတဲ့အခါ.. ရှေ့ကြည့် ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာ.. ဆေ့ ကြည့်လို့
ပေးတတ်တယ်.။ ကျွန်တော့် ကုတင် နဲ့ သုံးကုတင်ကျော်က မော်လမြိုင်သားဆိုရင်သီချင်းဆိုတာ.. ။R ဇာနည်
ရဲ့ အပြစ်မတင်ရက်ပါ .. သီချင်းကိုပေါ့..။ “ ဒီဒဏ်ရာတွေဟာ.. ၀ဋ်ဆိ လို့သာ ခံစားခဲ့ရတာ..” ဖြစ်သွားတယ်.။
မွန်ပြည်နယ်သားတွေက တော်တော်ခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်. ။စကားပြောရင်နဲနဲချွဲတယ်.။မော်လမြိုင်သူတွေ
ချောတယ်လို့တော့ ကြားဖူးပါတယ် ။ ကောင်းကောင်းတော့မမြင်ဖူးဘူး..။မွန်ပြည်နယ်သားတွေကိုသူတို့စ
ကားမပီတဲ့အကြောင်းသွားပြောရင်.. ငါတို့ကမှ ပြောမတတ်တာတဲ့.။ သူတို့က တစ်မျိုး.၊ မပြောတတ်ဘူး..၊
မလုပ်တတ်ဘူး လို့မပြောပဲ.၊ပြောမတတ်ဘူး.၊ လုပ်မတတ်ဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ်.။
နောက်ထပ် တစ်နယ်က . မြင်းခြံ၊ တောင်သာဖက်ကလူတွေကကျတော့. ထွန်း ဆိုရင် ထွင်းလို့ပြောကြ
တယ်.။ ခွန် ဆိုရင် ခွင်လို့ပြောကြတယ်.။မှတ်မှတ်ရရ ဆေးစစ်ကာလတုန်းကကျွန်တော့်ရှေ့က အောင်မျိုးထွန်း
ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းက သူ့ဆေးစစ်နံပတ်နဲ့ နာမည်ကိုအော်တဲ့အခါ.. နှစ်သုညခွင်ခွင် အောင်မျိုးထွင်း ဆိုလို့
ကျွန်တော်က ခွီး ကနဲ့ ရယ်မိလိုက်လို့. ပါရဂူအမျိုးသမီးဗိုလ်မှူးကြီးက လက်ထောက်မှောက်ချခိုင်းတာခံ
မိသောမင်းမျက်ဝင်း..၊ အာရုံမှာငြိတဲ့ မျက်ဝင်း လို့ ဆိုတော့ ရယ်ကြရသေးတယ်.။
နောက်ထပ်ကျွန်တော်နဲ့ တော်တော်ခင်တဲ့နယ်သားတွေက. တောင်ကြီးသားတွေ.၊ အင်းသားတွေ ပါ
တယ်၊ ရှမ်းတွေပါတယ်.၊ ပအို့ဝ်တွေပါတယ်ပေါ့ဗျာ.။ သူတို့နဲ့ ငြင်းရတဲ့ကိစ္စက သူတို့က အရောင်တွေကိုပြော
တဲ့အခါ.. ပန်းရောင်ဆိုရင် ၊ အပန်းရောင်၊ ရွှေရောင်ဆိုရင် . အရွှေရောင်လို့ပြောကြတယ်.။ ရှမ်းမလေးတွေပါး
ကပန်းနုရောင်သမ်းနေတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ..၊ ပန်းပန်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်။တိုင်းရင်းသား
တွေဖြစ်လို့ ကျွ န်တော်က နားလည်အောင်သေချာရှင်းပြပါတယ်.။ အနီရောင် ၊ အပြာရောင် ၊အစိမ်းရောင်စတဲ့
အရောင်တွေဟာ..နီသော ၊ပြာသော ၊ စိမ်းသော အစရှိတဲ့ နာမ၀ိသေသနတစ်ခုရှိလို့ အနီအပြာအစိမ်းပြော
လို့ရတဲ့အကြောင်း..၊ ပန်းသော ၊ ရွှေသော ၊ ခဲသော .စတဲ့နာမ၀ိသေသန မရှိတဲ့အတွက်.အပန်းရောင် ၊ အရွှေ
ရောင်၊ အခဲရောင် လို့ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်း. ပန်းနှင့်တူသောအရောင်၊ ရွှေနှင့်တူသောအရောင်၊ ခဲနှင့်တူ
သောအရောင် ဖြစ်လို့ ပန်းရောင်၊ ရွှေရောင် ၊ ခဲရောင် လို့ခေါ်ကြောင်း အမြုပ်ထွက်အောင်ရှင်းပြသော်ငြား မ
အောင်မြင်ခဲ့ပါ.။ ဒါပေမယ့် တောင်ကြီးသားတွေကတော့ ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ခင်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ
နောက်တစ်ချက်က ရန်ကုန်သားတွေနဲ့ မန္တလေးသားတွေ အမြဲတမ်းငြင်းခုံကြတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုရှိ
တယ်.။ အဲဒါက ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ မုန့်ဟင်းခါး ၊ မုန့်တီ ပြဿနာပါ.။ ကျွန်တော်တို့ အထက်အညာ
မှာ.မုန့်ဟင်းခါးဆိုတာက အရည်နဲ့သောက်ရတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို ခေါ်ကြတယ်.။ ကျွန်တော်တို့ အညာမှာမုန့်
တီ သုတ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျတော့..နန်းကြီးသုတ်လို့ခေါ်ကြတယ်.။ရန်ကုန်သားတွေက မုန့်ဟင်းခါးကိုကျတော့
မုန့်တီလို့ခေါ်ကြတယ်..(အားလုံးတော့ဟုတ်မည်မထင်ပါ..) ။အဲဒီကိစ္စကလည်း အမြဲတစေ ငြင်းခုံကြပြီးဘယ်
ကျောင်းမှာက မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က မြို့ကြီး၊ မြို့ငယ်၊ လူစုံ၊ အလွှာပေါင်းစုံကလူတွေလာကြတယ်..။
တောသူတောင်သား၊ ကျေးလက်က ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ပိုများပါတယ်.။ ဒေသပေါင်းစုံကအကြောင်းတွေကို
ကောင်းကောင်းသိရတယ်.။ သူတို့ရဲ့ စကားပြောဆိုပုံ..၊ စကားဝဲ ပုံတွေကိုလည်း သိလာရပါတယ်.။သတိထား
မိတာတစ်ခုရှိတယ်. ။ အဲဒါက တိုင်းရင်းသားသူငယ်ချင်းတွေ.။ ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရသလောက်ပြော
ရမယ်ဆိုရင်.. ကရင်သူငယ်ချင်းတွေက ခံယူချက်ပြင်းတယ်.၊ အလုပ်ကိုအင်မတန်ကြိုးစားတယ်၊ စည်းကမ်း
ရှိတယ်.၊ လူမှန်ကြီးတွေပေါ့ဗျာ.။စာအုပ်ကြီးသမားတွေ များတယ်.။ သူ့စိတ်ထဲမှာမှန်နေတယ်ထင်ရင် ယိမ်း
ယိုင်ဖို့ရာ ခဲယဉ်းတယ်.။ ရှမ်းသူငယ်ချင်းတွေကျတော့. ရိုးတယ်. ၊ပွင့်လင်းတယ်.။ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း
တယ်.၊။ ရိုသေသမှုရှိတယ်.။ ရခိုင်သူငယ်ချင်းတွေကျတော့ ပျော်တတ်တယ်.၊ ကူညီတတ်တယ်.။ စိတ်ရင်း
ကောင်းတယ်.။ မွန်တွေကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အမြဲတမ်းတွဲနေကြပါပဲ. ။ စိတ်ရင်းကောင်းတယ် .။ သာသည်
နာသည်မတွက်တတ်ဘူး.။ကျွန်တော်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်သားတော်တော်များများနဲ့ ညီရင်းအစ်ကိုလို နေခဲ့ဖူးပါ
တယ်.။ရန်ကုန်သားတွေက ခေတ်မီတယ်.၊ လူလည်တွေများတယ်.၊ Game ပစ်တာတွေဘာတွေ ကျွမ်းကျင်
ကြတယ်.။ ကွန်ပျူတာ Lab ခန်းဝင်တဲ့အခါ.သူတို့က ကျွမ်းကျင်ကြတယ်.။မန္တလေးသားတွေက နယ်သား
အင်မတန်ချစ်ကြတယ်.၊ ဧရာဝတီတိုင်းသားတွေလည်း အဲဒီလိုပဲနယ်သားချင်းအင်မတန်စည်းလုံးကြတယ်.။
တောင်ကြီးသားတွေ ဂစ်တာတီးကျွမ်းကြတယ်.။ ပြင်ဦးလွင်သားတွေက ရုပ်ချောတယ်.။(နောက်ဆုံးမှ ကပ်
ကျွန်တော့်အထင် လူမျိုးစစ်စစ်တွေထက် ကပြားတွေက ပိုပြီးတော့. ချောကြတယ်ထင်တယ်.။ ကချင်-
ဗမာ တို့..၊ ရခိုင် - ဗမာ ၊ မွန်-ဗမာ စတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ရုပ်ချောကြတာများတယ်. ။ အပြင်ကသူငယ်ချင်း
တွေလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ..။ရှမ်း-ဗမာတွေဆိုလည်း ပိုတောင်ချောသေးတယ်.။( အော် မေ့လို့ ..
ကျွန်တော်က ရှမ်း-ဗမာ ဗျ.။)
လိုက်ရဲ့..ယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ လူနေမှု ပုံစံတွေ၊ စကားအပြောအဆိုတွေ ကို ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်.။ မြန်မာလူ
မျိုးတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့တွေ ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့.. အကြောင်းတွေ ၊ထုံးတမ်းတွေကို
လည်းသိလာရတယ်.။ကျွန်တော်တို့တွေက နိုင်ငံရဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီး ၊ဒေသအသီးသီး ၊လူတန်းစားအလွှာ
အသီးသီးကနေ လာကြတယ်.။ ပြီးတော့လည်း လေနှင်ရာ ကိုလွင့်သွားသလိုပဲ.။ တာဝန်ကျရာအသီးသီးကို
လွင့်စင်သွားခဲ့ရတယ်..။ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ဖိုင်နယ်ရီးယားတုန်းက မထွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ် သုံးမိုးဆိုတဲ့.အခွေ
ရဲ့ Title သီချင်း “ သုံးနှစ်သုံးမိုး ” ဆိုတာ အဲဒီအကြောင်းလေးကို ရေးထားတာပါ.။ Lyrics လေးကိုကြည့်ကြည့်
ပေါ့.။နောက်မှ ဆိုပြီးတင်ပေးပါ့မယ်.။(လေနဲ့ ပေးထားတဲ့ကတိအကြွေးတွေလည်းလည်ပင်းရောက်နေပါပြီ..)
Verse (1)ဆောင်းဦးရဲ့ ရွက်ကြွေ အတိတ်ကို နှိုးဆွ
ရင်မှာဝိုးတိုးဝါးတား ဆွေးရင်း.. ကျန်ခဲ့...........
Verse(2)နွေဦးရဲ့ ပိတောက်တွေ တိတ်ဆိတ်စွာ နိုးထ
တစ်ခါတစ်လေ တမ်းတမ်းတတ အတိတ်ရဲ့ ခြေသံများ
ငါလေ တွေးရင်းတွေးရင်း ဆို့နင့် . ကြေကွဲ....
Chorus:တွေးရင်း ဆွေးနေမယ် အချိန်တိုင်း
မရှိတော့ပေမယ့်.. သူငယ်ချင်းတွေ.. ( သုံးနှစ်သုံးမိုး..)
စွဲမြဲရှင်သန်နေဆဲ.. ပုံရိပ်တွေ.. (သုံးနှစ်သုံးမိုး) ..
Ending:ကြွေကျသွား. သစ်ရွက်ခြောက်တို့ လေအဟုန်မှာ..
ဂုဏ်ယူရင်း. တွဲထားလက်တို့ ပျက်ပြယ်သွား....
ကြပါစေဗျာ...။(မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်ရုပ်ချောတာမယုံရင် အမေ့ကိုသာ မေးကြည့်ပါတော့ဗျာ...။ဟီးဟီး.)
Posted by မိုးသက် at 3:38 PM 14 comments Read more
နည်းပညာအကြောင်းမရေးပါဘူးဆိုမှ တစ်ခုကပြောပြချင်သေးတယ်.။ အထူးသဖြင့် အစ်မကြီးတွေများ
မယ်ထင်တယ်.။ Facebook ကဖြစ်ဖြစ်..၊ တစ်ခြားနေရာကဖြစ်ဖြစ် သဘောကျတဲ့ပုံလေးတွေဒေါင်းပြီးတော့..
လွယ်လွယ်ကူကူ Desktop ပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်.။အဲ့ဒီလိုနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံတွေက များလာရော..။
Desktop က ပွလာတယ်. ပုံတွေ Shortcuts တွေ နဲ့ရှုပ်လာရော.။ အဲဒီအခါကျတော့.အဲဒီပုံတွေကို ရွေးပြီးတော့
ဖိုဒါတစ်ခုတည်း ထည့်ထားရတယ်. ။ နောက်တော့.. ထည့်ထားရင်းနဲ့ပဲ. ။ ဆက်ဒေါင်း နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်
အလုပ်ရှုပ်မှာစိုးလို့ . Batch ဖိုင်လေးတစ်ခု ရေးကြည့်ထားတယ်.။
Run box ကနေ notepad လို့ရိုက်ပြီး Notepad ကိုဖွင့်.(ဘယ်လိုဖွင့်ဖွင့် Notepad ဖွင့်လို့ရရင်ရပြီ..)
ပြီးရင် အောက်က Source Codeလေးတွေကို မမှားအောင်ကူး.(Copy - Paste လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ.)
xcopy *.jpg Photos /y
xcopy *.png Photos /y
xcopy *.bmp Photos /y
xcopy *.gif Photos /y
del *.jpg /q
del *.png /q
del *.bmp /q
del *.gif /q
Msg * " Your Photos had been Moved!!!"
အဲဒါလေးကို Notepad ပေါ်ကိုကူးပြီးတော့.. Desktop ပေါ်မှာ. cleaner.bat လို့ Save ထားလိုက်..။
အဲဒီကောင်လေးကို Double ကလစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ . ပုံတွေအကုန် Desktop ပေါ်က. Photos ဆိုတဲ့ ဖိုဒါ
လေးထဲကိုရောက်သွားမယ်..။နောက်ထပ် ပုံတွေရောက်လာရင်လည်း လိုက်ရွေးပြီးရွှေ့စရာမလိုတော့ပါဘူး.။
အဲဒီ Batch ဖိုင်လေးကို Run ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.။ကိုယ့်ဖာသာ စိတ်ကူးကွန့်မြူးပြီးတော့ နောက်က နေဖိုင်အမျိုး
အစားတွေထပ်ထည့်ပေါ့ဗျာ.. Mp3 တို့. Txt တို့ ထပ်ထည့်ပေါ့.။
သူများရေးပြီးသား အကြောင်းအရာတွေကို အာဘော်ပြောင်းပြီးမရေးချင်လို့လွယ်လည်းလွယ်အဆင်
လည်းပြေမယ့် ဟာလေး ပြောပြတာပါ.။ ဒီပရိုဂရမ်လေးကအဲဒီထက်တိုအောင်ရေးလို့ရသေးတယ်ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ကတော့တူတူပါပဲ.။နည်းပညာပိုင်းကို မလိုက်တော့ဘူးဆိုကာမှဒုတိယနှစ်
ရောက်ရင် ပရိုဂရမ်းမင်း လုပ်ရဦးမယ်ဆိုတာ သတိလာပေးပါတယ်.။ ဒီမှာ အသုံးများတာက . C++ ကိုအသုံး
များပါတယ်.။ ကျွန်တော်လေ့လာဖူးတာက. C# ပါ.။ C# ကနည်းနည်းပိုမြင့်တယ်.။ Security လည်းပိုကောင်း
သလို လွယ်လည်းပိုလွယ်ပါတယ်.။C ကိုလည်းသင်ဖူးတော့.. C++ လည်း သိပ်တော့ခဲ့ယဉ်းမယ်မထင်ပါဘူး.။
ဒါပေမယ့် အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားတာ ကြာပြီဆိုတော့ စာအုပ်တွေ ပြန်လှန်ရဦးမှာပါ.။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်
တာက တစ်ဖက်ဖက်မှာ ထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့.. ပေမီဒေါက်မီ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတဲ့သူဖြစ်ချင်တာပါ.။လောလောဆယ်
ဘယ်ဘက်ကိုမှ ရေဆုံးမြေဆုံးမလိုက်နိုင်သေးပါဘူး.။ ဟိုဟာနည်းနည်း. ၊ သည်ဟာနည်းနည်းနဲ့..မျောက်သစ်
ခုတစ်လော အပြင်စာတွေပိုဖတ်ဖြစ်နေတယ်.။ ဟိုတစ်နေ့က ဖတ်ရတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပြောပြမယ်.။
ရေးတဲ့သူက ဦးနု။ စာအုပ်နာမည်က ငရဲဆိုချို နဲ့လားဗျို့ တဲ့.။ ကျွန်တော် ဖတ်မိတော့. တစ်ဆက်တည်းမဖတ်
နိုင်ဘူး.။ ဖတ်လိုက် နားလိုက်.၊ ဖတ်ရတယ်. ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သွေးလန့်လာလို့ပါ.။ရေ၊ မီး၊ သူခိုး၊ သား
သမီးဆိုး ၊ မင်းဆိုး ဆိုတဲ့ ရန်သူမျိုး ငါးပါးထဲက သားသမီးဆိုးအကြောင်းရေးထားတာပါ.။တကယ်အဖြစ်အ
ပျက်နဲ့ဆင်ပါတယ်. ။ ကျွန်တော် ဒီတစ်သက်ထိ အဲဒီထဲက ဇာတ်ကောင်လိုလူ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး.။ ကြာ
ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ. ။ ကျွန်တော် Media Fire မှာတင်ထားပေးပါ့မယ်.။ ဖတ်ပြီးရင်..စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်
ထဲမှာ တစ်ခုခု ကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်.။
ကဲ မပြည့်အိုးကတော့ ဘောင်ဘင်ခတ်မိပြန်ပါပြီ..။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး . မစွံသေးတဲ့သူတွေ.အပျိုကြီး၊ လူပျို
ကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်လို့တော့ စိတ်မကူးမိကြနဲ့နော်..။ (ဟဲဟဲ ညွှန်းတာတွေသိပ်များသွားပြီ..)
ကဲ အောက်မှာ ဒေါင်းကြပေါ့ဗျာ..။
ခုတစ်လောမြန်မာနိုင်ငံမှာသိပ်ပူနေတယ်လို့ကြားပါတယ်.။ လောလောဆယ် မောင်မိုးသက်တို့ကတော့
အနွေးထည်မချွတ်ရသေးပါဘူး.။ နှင်းတောထဲတော့ ဘောလုံးထွက်ကန်နေပါပြီ..။ သင်္ကြန်တွင်းသီချင်းဆိုပြိုင်
ပွဲကလည်း နွှဲရဦးမှာဆိုတော့. ဒီလ ပွဲတွေဆက်နေတယ်. .။ နောင်များမှာလည်း ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ ထပ်မံပြီး
Posted by မိုးသက် at 8:20 AM7comments Read more
Labels: နည်းပညာ, ရောက်တတ်ရာရာ
Posted by မိုးသက် at 4:42 AM4comments Read more